AMPARAFARAVOLA : Nomena 20 tapitrisa Ariary ireo jiolahy ho takalon’ny ain’ilay zaza
Mandry tsy lavo loha tanteraka ireo mponina ao Amparafaravola sy ny manodidina noho ny firongatry ny fakàna an-keriny ao an-toerana. 31 juillet 2019
Raha ny tatitra voaray farany mahakasika ilay zazavavy enina taona nisy nangalatra ny faha-25 jolay lasa teo iny dia fantatra izao fa efa tafaverina eo am-pelatanan’ny ray aman-dreniny izy io rehefa nandoavana vola mitentina 20 tapitrisa Ariary nomena ireo mpanao “kidnapping” araka ny angom-baovao voaray tamin’ireo mponina Ny loharanom-baovao iray avy amin’ny mpitandro filaminana tsy nanaiky nitonona anarana kosa, dia milaza fa tafakatra 60 tapitrisa Ariary ny sandan’ny famotsorana.
Teny amin’ny toerana antsoina hoe Manevoka, Kaominina Ambakireny no fotoana nomen’ireo olon-dratsy ny fianakaviana hifanomezana ny vola sy ilay zaza, omaly maraina, tokony ho tamin’ny sivy ora tany ho any. Taorian’io tranga io dia raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo jiolahy sy ny mpitandro filaminana mampandry tany any ao an-toerana hatramin’ny omaly. Araka ny loharanom-baovao voaray farany dia tsy mbola hita popoka ireo olon-dratsy nahavanon-doza, ka manambatra hery ireo zandary amin’ny fanatanterahana ny vela-pandrika hijokoana azy ireo hatreto. Tsara moa ny manamarika fa efa tao anatin’ny iray volana izay dia nahazo laka ny resaka “kidnapping” tao amin’ity Distrika ity, hany ka mitaintaina mafy ny fokonolona ankehitriny.
Raha tsiahivina lavitra ny distrika nitrangan’ny fankàna ankeriny nisesisesy teto amin’ny firenena ny faritra nitrangan’ity fakàna an-keriny ity. Ambakireny dia tsy lavitra an’ny kaominina Brieville nisehoan’ny fakàna an-keriny an’ilay nikasa hirotsaka kandida depiote maty novonoin’ireo mpaka an-keriny tamin’ny voalohan’ny taona ireny. Dia izao mbola mamela farasisa sy takaitra ratsy izao ireo mpanao ratsy amin’ny fakàna an-keriny sy fitakiana vola tsy ara-drariny amin’ireo ray aman-dreny lasibatra izao. Izany hoe tsy lavitra ny Distrikan’i Tsaratanàna ity toerana nitrangan’ny fakàna an-keriny ity. Ahiana araka izany ny mety hisian’ny fifandraisan’izao mpanao ratsy amin’ireto toerana tsy mifanalavitra loatra ireto.
Miandrandra vahaolana matotra avy amin’ny fitondram-panjakana ny rehetra amin’izao fotoana izao.